MacBook ohuru a bu ihe eji acho oru? | Esi m mac
Anyị nwere ike ikwu na, na Apple Keynote ikpeazụ emere na emume mmeghe nke WWDC 2017, ọ hapụghị anyị enweghị mmasị maka ọtụtụ ihe. Otu n'ime ha bụ ime ka mmelite doro anya nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmputa Mac niile, dị ka akara ngosi doro anya nke ntinye aka nke ụlọ ọrụ maka kọmputa Mac yana ịkọwapụta ngwaahịa maka ụdị onye ọrụ ọ bụla. Ọfọn, onye ọrụ Mac ọ bụla nwere mkpa ụfọdụ yana inwe Mac nke dị nso na ọchịchọ anyị dị ka o kwere mee ga-ezu oke (ana m ahapụ ya na ndepụta aro nke Apple).
Maka ihe ka n'ọnụ ọgụgụ, ọrụ achọrọ bụ: ịgụ ozi email, ibe, ibe weebụ, netwọkụ mmekọrịta, mgbanwe nke faịlụ, vidiyo ma ọ bụ foto, iji jiri ya na dọkụmentị. Na ndị a mkpa, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ndị ọzọ ala nwere obere, fechaa na mara mma imewe, anyị na ngwá bụ MacBook. Ọ bụ ngwa ọrụ zuru oke yana anyaụfụ nke ọtụtụ ndị ọrụ laptọọpụ.
Ugbu a, anyị nwere ike ịrịọ gị maka ihe ọzọ? Ya mere, dị nnọọ ka anyị MacBook mounts Intel's dual-core m3 chip, ma ọ bụ site na imewe ngwá ma ọ bụ ikike ngwaike. Na usoro nhazi a, ịrụ ọrụ foto ma ọ bụ nhazi vidiyo dị mgbagwoju anya bụ ọrụ dị mgbagwoju anya.
Apple maara na kọmputa ndị a bụ ihe ịga nke ọma n'ahịa, dị ka Macbook Air. Yabụ, mgbe ọ bụla enwere ike, gịnị ma ị melite MacBook gị? Ọfọn site ugbu a gaa n'ihu anyị nwere ike ịnweta MacBook na i5 na ọbụna i7. N'ihe banyere i5 processor, Apple nwere nhazi atọrọ, ee anyị ga-akwụ 300 euro ọzọ karịa ụdị nke ọkọlọtọ na m3 anyị maara nke ọma. Anyị nwere Intel GHz dual-core Intel Core i5, na Turbo Boost ruo 1,3 GHz, nakwa na nke a, ihe Ebe nchekwa SSD bụ 512GB, jiri ya tụnyere 256 GB nke nsụgharị mbụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ atụmatụ ndị ọzọ, Apple na-enye gị ohere, mgbe ịmechara akụrụngwa ahụ, iji tinye ngwa a na 7 GHz i1,3. Mana n'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ike dị ukwuu, ị nwere ike ịtụle MacBook Pro, wuru maka arụmọrụ dị elu, na ọzọ ventilashion, batrị (n'ụzọ ezi uche dị na njikọ oriri) na ndị ọzọ RAM modul.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » MacBook ohuru a bu ihe eji acho oru?
Onye ntụgharị nke oge a bụ otu ngwa dị mma iji tụgharịa asụsụ ndị ọzọ